अन्तराष्ट्रिय | A News Portal of Special News In Depth Form Kathmandu Nepal…डिजिटल जमानाको इ-पत्रिका !
यी युवती जो अत्यधिक राम्री भएर नै जागिरबाट निकालियो
Posted By: Birendra Rajon: February 24, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments एजेन्सी, ‘ब्यूटी विथ ब्रेन’ यो एउटा भनाई मात्र नभई एक जीवित उदाहरण पनि हुनसक्छ । सुन्दर शरिर, सुगठित शरिर भएका प्रत्येक मानिस मनोरञ्जनकै क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । ती व्यक्ति...	Read more Share
भारतिय जनता पार्टीका नेता बिजय जौली विरुद्ध ‘जक’ मुद्दा दायर
Posted By: Birendra Rajon: February 22, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments नयाँदिल्ली । भारतको सत्तासिन भारतिय जनता पार्टीका पुर्व बिधायक तथा पुर्व बिदेश बिभाग सदस्य बिजय जौली विरुद्ध ‘जक’ अर्थात जर्वरजस्ती करणी मुद्दा दायर भएको छ । पछिल्लो सम...	Read more Share
आईएस नियन्त्रित क्षेत्रमा इराकी सेना
Posted By: Birendra Rajon: February 20, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments इराकको सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेटको नियन्त्रणमा रहेको अन्य बाँकी भागमा प्रवेश गर्ने क्रममा मोसुल क्षेत्रका गाउँहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विभिन्न प्रकार...	Read more Share
भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा नयाँ मुख्यमन्त्री
Posted By: Birendra Rajon: February 17, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा नयाँ मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन् । गभर्नर सी विद्यासागर रायले एआइएडिएमकेका नेता ई पलानिसामीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएका हुन् । राजनीतिक अ...	Read more Share
आत्मघाती आक्रमणपछिको झडपमा ७० को मृत्यु
Posted By: Birendra Rajon: February 16, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments बेरुत । उत्तरी सिरियामा औपचारिक रूप रहेका दुई जिहादी समूहबीच गत २४ घण्टायता भएको झडपको क्रममा करिब ७० लडाकूको मृत्यु भएको छ। मानव अधिकारी समूहले मङ्गलबार सो जानकारी दिएको छ। दुई जि...	Read more Share
बाराक अोबामा यसरी मनाउँदैछन् आफ्नो छुट्टी (भिडियो-सहित)
Posted By: Birendra Rajon: February 08, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments एजेन्सी । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा अहिले विदा मनाइरहेका छन्। ८ वर्षसम्म राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका ओबामा अहिले आफ्ना साथी रिचार्ड ब्रान्सनसँग छुट्टी मनाइरहेका छन् । राष...	Read more Share
आप्रवासी प्रतिबन्ध राष्ट्रपतिको अधिकार: ट्रम्प
Posted By: Birendra Rajon: February 07, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments बीबीसी, अमेरिकाका न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आप्रवासी प्रतिबन्धलाई सही बताउँदै अदालतबाट यसलाई राष्ट्रिय हितमा पुनः लागु गर्न आग्रह गरेको छ । उनले अदालतमा आफ्नो औप...	Read more Share
भिषा हुने सबैले अमेरिका प्रवेश पाउने, ट्रम्पलाई अदालतको चुनौती Posted By: Birendra Rajon: February 06, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments एजेन्सी, सियाटल । मुस्लिम बाहुल्यता रहेको सात मुलुकबाट अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अदालतले उल्टाइदिएको छ। राष्ट्रपतिको आदेशविर...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 05, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments नयाँ दिल्ली । भारतमा पाँच राज्यमा हुने विधानसभाको निर्वाचन शुरु भएको छ। उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, गोवा, उत्तराखण्ड र मणिपुरमा ३६ दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शनिबार पन्जाब र गोवाबाट सुरु भए...	Read more Share
शरणार्थी विवाद: ट्रम्प र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबीच भनाभान !
Posted By: Birendra Rajon: February 02, 2017In: अन्तराष्ट्रियNo Comments वासिङटन । गत शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री माल्कोम टर्नबुलबीच भएको टेलिफोन वार्तामा दुई नेताबीच भनाभन भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका...	Read more Share